Diisambar 2020 - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Bisha: December 2020
Bogga ugu weyn / 2020 / December
Adeegyada CECA ee Cuntada waxay iskaashadeen kaniisadaha maxalliga ah!
Cunnooyinka dib-u-kululeeyaha ee xoqan lagu sameeyay ayaa la geeyay Inverness seddex jeer usbuucii. Fadlan buuxi hal foom ardaykiiba / qofkiiba illaa Jimcaha 12:00 duhurnimo. Quraac kasta waxaa la siin doonaa caano, miro iyo walxo liiska ku qoran. Qadada waxaa lagu siin doonaa caano, miro, khudrad, iyo geedka weyn ee hoose. Ardayda waxaad heli doontaa cunnada Combo maadaama ay bilaash u yihiin dhammaan ardayda.
December 9, 2020December 14, 2020Ken MyersIn CEC Aurora